Sidee loo sameeyaa astaanta mashiinka baakadaha dharka?
Summaddu waa fiirinta holographic ee wadarta dhammaan hantida aan la taaban karin ee makiinadda baakadaha dharka ama jirka sumadda. Shaqada, tayada iyo qiimaha summaddu waa furaha qiimaha isticmaale ee sumadda, n ...
Maxay dadku u rabaan inay doortaan mashiinka calaamadaynta oo tayo sare leh?
Hadda markay dadku alaab iibsadaan, waxay fiiro gaar ah u yeelan doonaan arrimaha qaarkood, dabcan, qiimaha ayaa dadka badankiisu ka welwelsan yihiin, dadka qaarkood markay la tashadaan qalabka mashiinka calaamadeynta Dongguan, waxay dhihi doonaan, waa imisa tan, marka qiimaha caymiska kadib, waxay dhihi doontaa sidaas expensi ...
Waa maxay muhiimadda adeegga iibinta kadib ee mashiinnada summada otomaatiga ah?
Ka dib marka mashiin kasta la iibiyo, waxaa jiri doona qaddar go'an oo adeeg-iibin kadib ah. Markay dhibaato jirto, macaamiisheena waxay heli karaan xal fiican. Sidoo kale waa run mashiinka calaamadeynta otomaatiga ah. Waa maxay saamaynta? Marka, ku astaynta asturnaanta dhinaca aragtida ...
Calaamadiyaha Dhalada Khamriga, Mashiinka Xirmada Dharka, Labeller Dhalo, Calaamadiyaha Dhalada, Mashiinka Calaamadinta Dhalada, Calaamadiyaha Dhalada Beerka,